16 / 07 / 2021 16 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 411 Views စာ0မှတ်ချက် 40410 ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခွန်ဆက်, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, City, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, Friends, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, Lego Adidas, Lego CIty, Lego Friends, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego VIP, LEGO.com, Polybag, အိတ်များ, စျေးဝယ်, VIP
ယနေ့မှ စ၍ နောက်သီတင်းပတ်အထိအခမဲ့အရာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုသင်ရွေးနိုင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း မှာခြေစစ်ပွဲဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ LEGO.com.
အွန်လိုင်း (သို့) ဆိုင်တွင်ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ဖြတ်၍ £ 40 / $ 40 / € 40 သုံးစွဲခြင်းသည်သင်၏အကြားရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် Lego CITY 30568 စကိတ်နှင့် Lego Friends အသစ်စက်စက်ဖြစ်သော Emma's Magical Box သည် 30414 ဖြစ်သည် ကွမ်းခြံကုန်း 2021 သည်။
သင်ဈေးဝယ်နေလျှင် LEGO.comနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုအတွက်ကုဒ်တစ်ခုထည့်ရန်လိုအပ်သည် ကွမ်းခြံကုန်း ကုန်ပစ္စည်းမှာ သင်က 30568 စကိတ်စီးပြီးနောက်သင် SK11 ကိုရိုက်ထည့်; သငျသညျ 30414 မင်းသမီး Emma ရဲ့မှော် Box ကိုပိုမိုနှစ်သက်လျှင် MG11 ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအရ၎င်းသည် 'အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်တစ်စုတည်း' ဟုဆိုလိုသည် ကွမ်းခြံကုန်း ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်
မည်သည့်ရွေးချယ်မှုပင်မဆိုအသေးစားရုပ်သေးသို့မဟုတ်အရုပ်သေးသေးလေးနှင့်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။ ပိုးအိစံ ပုံစံ။ ဒီ polys နှစ်ခုစလုံးကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူမှုကိုအားမပေးနိူင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာအလွန်ကောင်းပါတယ် LEGO.com, လက်ရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ် နှစ်ဆ VIP အချက်များပရိုမို.
၎င်း polys များသည် 40410 Charles Dickens Tribute နှင့်အတူတကွတည်ရှိပြီးလက်ရှိတွင်ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁၅၀ နှင့် ၄၀၄၈၆ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ adidas £ 95 / $ 85 / € 95 အထက်မည်သည့်အမှာကိုမဆိုရရှိနိုင်သောမူရင်းစူပါစတား။
အမှန်ကတော့အခုအချိန်မှာ US မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ ၁၅၀ + ကို ၀ ယ်လိုက်ရင်မင်းကမင်းကိုအများကြီးရလိမ့်မယ် Lego မင်းကို သင့်အားဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်အထိ (သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်နောက်ဆုံးကျန်နေသည်အထိ) ရရှိနိုင်သည် ကွမ်းခြံကုန်းVIP အချက်နှစ်ချက်သည်ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်တွင်ဖြစ်မည်။
← LEGO နှစ်ဆ VIP အချက်များအထူးနှုန်းများမကြာမီအဆုံးသတ်ပါမည်
Lego ဖြစ်ခဲ့သည် Star Wars'' ဂျီဒီဒီဘော့နီးပါးဒုတိယပွဲမှာပါ →